Ukufaka i-Microstation XM-Geofumadas
Ukufaka i-Microstation XM
Epreli, 2008 Microstation-Bentley
Ndandiphawula ezimbalwa iintsuku ezidlulileyo ukuba ndifumene i-albhamu ye-Microstation XM, equka i-Bentley Imephu ne-Bentley Cadastre; kodwa ngenjongo hlaziya ubomi wam umatshini wam ndabhalela ngeli xesha xa ndibuya xa ndihamba.
Impembelelo yokuqala yinto engaqondakaliyo, kubasebenzisi beenguqu zangaphambili, sazi ukuba ayifumananga nantoni na enye ukuyifaka. Ngenxa yokuba ngoku kuphuhliso kwi .NET, kukho imfuneko, xa ucela i-CD Khetha ngaphakathi. (ups! Ukuba awuzange ufike, khuluma nentombazana enhle Bentley Spain kuthiwa yiBlanca kwaye uya kufumana indlela yokuyibeka kwi-FTP)
Ngaba akumele kube yinkqubo okanye ubuncinane kufuneka kube nolwazi olungakumbi kwi-intanethi, iSan Google ikuthumele kwiimfuneko zokuqala kwamanye ama-XM.
Ngokomzekelo Khetha iseva XM ifuna
MSXML 4.0 SP2 okanye ngaphezulu
IiNcedisi zeeNkcukacha ze-Intanethi IIS (kunye nenkxaso ye-ASP.NET)
Kwaye ukuqala kokuthathwa kwethu ngabantu abafayo kukuba into efanayo isetyenziselwa i-Microstation XM ... kakuhle akukho.
Ziziphi izinto ezifunekayo kwi-Microstation XM
Ziyimpawu zendawo yokuphuhliswa kunye neelayibrari eziyimfuneko ukufakela ukusebenza. I-ESRI ne-AutoDesk ibiza ngokuba yiPack Pack, kuba uBentley uqhubeke nomkhwa wakhe wokujonga ngathi akukho mntu ubiza ngokuba yi-pre-required ... ok!
Ziziphi izinto ezifunekayo
Yilapho i-mule yenze i-earwig kwisitayela seHugo Sánchez noGenaro ... kuba andizange ndifumane apho ndingayilanda khona, nangona ndiqinisekile ukuba kufuneka kubekho indawo engabhalwa yi-Google. Yingakho beza ne disk, okanye bakuyo ndawo ukusuka apho ukulandwa khona; Kule meko, ndifaka inguqulo ye-08.09.04.51.
Oku kuquka ukuhlaziywa:
I-Windows Installer Version 3.1v2
Microsoft .NET Framework 2.0 64 bit
Microsoft Pack .NET Framework Language Pack
I-Microsoft XML Parser (MSXML) 4.20
IMicrosoft Visual Basic kwiZicelo eziphambili
IMicrosoft Visual Basic kwiZicelo ezikuloo ndawo
Ukulawulwa kweDHTML yokuPhatha kwezicelo
Ndiyifumene kakhulu, kuba inkqubo iyafumanisa ukuba kukho ingxaki yokufakela ithala leencwadi kwaye iyakuphazamisa into engeyomfuneko
Oku kuphakamisa ukuba iinguqulelo ezahlukeneyo zithatha iifayile ezifunekayo ezahlukileyo. Ekugqibeleni ndimele ndivume ukuba inkonzo yeBentley ibhetele, ubuncinane nge-Skype ... nangona kufuneka benze okuyimfuneko, khumbula ukuba abazifundisayo abazilindele ukusebenzisa i-support ... kuphela i-Google.
Ngaphandle kwale ethile kancinane, nomfakeli isebenza kakuhle kakhulu. Kuba ngoku, mna ithemba, ndiyazi ukuba le nto ukuba iyaphuhliswa XFM .NET, xa sungula ku 2004 ekrwada ngokupheleleyo, phantse luhlanganiswe Cadaster. Ndizama uthi kubo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Yintoni endiyenzayo ngoku?
Post Next Kuphi ukufumana ii-Microstation manualsOkulandelayo "
Iimpendulo ze-3 "Ukufaka i-Microstation XM"
Ndiyabulela uTom, andizange ndiyifunde ... kwaye ndiya kugcina ingqondweni
Sawubona G!, Ndishiye imibuzo ethile malunga ne-Microstation V8 ne-XM kwikomiti yeCartesia. Mhlawumbi unakho ukuphendula ngayo:
Ndiyadinga le nguqulo ye-microstation, ndinayo i-geopack xm kodwa icela ukuba ine ubuncinane inguqu ye-microstation onayo, ndicinga ukuba singenza utshintsho, i-imeyile yam jimyto2000@yahoo.es
Imiqobo ethintela ukuziva kwe-satellite kude ukuba ingabanzi